गर्भाशय को सामने पर्खाल मा प्लेप्टा: उत्तेजना को लागि बहाना या आदर्श को एक प्रकार?
प्रत्येक महिलाले आशा गर्दछन् कि बच्चा जान्छ कि प्लान्सेन्टा कति महत्वपूर्ण छ। यो तथ्यको बावजूद यो एक असीमित शरीर हो, यसको महत्व अधिकृत गर्न असम्भव छ। प्लेसेन्टा मार्फत, बच्चाले अक्सीजन र पोषण प्राप्त गर्दछ। अल्ट्रासाउन्ड मेशिनमा अर्को नियमित परीक्षा पछि, महिलाहरूलाई कहिलेकाहीं सूचित गरिन्छ कि पेसेन्टा गर्भाशयको बाहिरी पर्खालको छेउमा अवस्थित छ । त्यसैले यसको के मतलब छ? के यो आदर्श हो? र बच्चालाई हान्ने छैन?
निस्सन्देह, कुनै विशेषज्ञले आश्वस्त गर्न सक्दछ कि अगाडिको पर्खालको साथ प्लासेन्टा रोगविज्ञान होइन। यो कुनैपनि तरिकाले गर्भावस्थाको पाठ्यक्रम र जन्म प्रक्रियालाई असर गर्नेछैन। वैसे, प्लेस्टा यस्तो विशिष्ट अङ्ग हो जसले आफैलाई र कसरी मनपर्छ र त्यो कहाँ प्रसन्न सक्छ। प्राय: यो गर्भवती महिलाहरु मा गर्भाशय पछि को पछि स्थित छ। दुर्लभ अवस्थामा, यो गर्भ निधि को क्षेत्रमा संलग्न हुन सक्छ। अनि कहिलेकाँही, अज्ञात कारणहरूको लागि, यो गर्भाशयबाट निस्कने ठाउँमा अवस्थित छ, यसैले आंशिक रूपमा वा पुरा तरिकाले स्वतन्त्र जन्मको लागि बच्चाको पथ रोक्दछ। यो पहिले देखि नै पथोलोजी मा लागू हुन्छ, जसमा एक योजना बनाई सेजुरीन खण्ड निर्धारित गरिएको छ ।
सामान्यमा, यदि पेसेन्टा अगाडि पर्खालमा अवस्थित छ भने, त्यसपछि धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। डाक्टरबाट पहिलो ट्रिमिस्टरमा तपाईंले धेरै कुरा गर्भपतनबाट बाहिर निस्कने प्रस्तुतीकरणको बारेमा सुन्न सक्नुहुन्छ। तर यो उत्साह को कारण होइन। यदि यो निदान 6-8 हप्तामा राखिएको छ भने, 25-26 हप्ताको लागि यसको बारेमा कसैले पनि सम्झनेछैन। गर्भावस्थाको प्रगतिको रूपमा, पेसिएन्टा बढ्छ। यसैले, गर्भधारणको समयमा, यो बच्चाले हस्तक्षेप गर्दैन।
तर अझै, के सामने पर्खाल मा पेसोन्टा को स्थान हुन सक्छ? त्यहाँ एक नमुना छ: सारा मुद्दा यो छ कि सेसरियर सेक्सन (यदि यो आवश्यक छ) को साथ, चीज पिक्सेन्टा को स्थान मा बिल्कुल नै हुनेछ। यो रक्तचाप को रूप मा यस्तो जटिलता देखि भरा छ। तर अपरेसन भन्दा पहिले, डाक्टरहरू स्थान निर्दिष्ट गर्छन् र प्रचुर मात्रामा रगतको कमी ल्याउन प्रयास नगर्नुहोस्।
यो सम्भवतया एक चीज हो जुन तपाईं चिन्ता गर्न सक्नुहुनेछ (तर धेरै धेरै छैन!) यदि तपाइँसँग अगाडि पर्खालमा पेसोन्टा छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य उल्लेख गर्दै लायक छ। बारम्बार गर्भावस्थाको बेला, पेसिसेन्ट प्रायः पुरानो सिव्यु साइटमा गर्भ राख्दा सेजररी सेक्शनमा संलग्न हुन्छ। यो मात्र सुविधा हो जुन पछि गर्भवतीहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
एउटा महिला, बच्चाको आशा गर्नुपर्दछ, कसरी पेसेन्टा स्थित छ भन्ने बारेमा थाहा पाउनु - अगाडि पर्खालमा वा पछाडि। र पनि अग्रिम निर्दिष्ट गर्न चाहे कि यो बच्चा जन्म मा हस्तक्षेप गर्नेछ या नहीं। तर, एक नियमको रूपमा, यदि एक महिलाले कुनै समस्या भएको खतरा छ भने, त्यो डेलिभर वार्डमा डेलिभरको अपेक्षित मिति देखि हप्ता हप्तामा राखिएको छ। यो बच्चा र स्त्री दुवैबाट जटिलताहरू रोक्न आवश्यक छ। त्यसैले यो तर्क लगाउन सकिन्छ कि प्लान्सेन्टाको अगाडिको स्थानमा गर्भावस्था कम्तिमा अरु सबै भन्दा फरक फरक हुनेछैन। जन्म बिना कुनै जटिलताहरू पारित हुनेछ र स्वस्थ, बलियो बच्चाको रूपमा समाप्त हुनेछ।
केही देशहरूमा प्लान्सेन्टासँग सम्बन्धित धेरै रोचक usages छन्। जन्म पछि यो लिइएको छैन, र जवान आमालाई दिइन्छ। अनुकूलन अनुसार, यो तपाईंको घरमा लैजान र एक रूख अन्तर्गत गाडिनु पर्छ। तर हाम्रो देशमा यो जाँच गरिन्छ र त्यसबाट हटाइएको छ।
रेबीज: मानिसहरूलाई, लक्षण र निदान गर्मी चालू अवधि
Trigeminal कोड र आनुवंशिक कोड को कार्यात्मक एकाइ
स्वास्थ्य को एक समूह के हो?
Hyperglycemic coma मा आपतकालीन हेरविचार: कार्यहरू एक अल्गोरिदम
साबुन किन धुन गर्छ? उत्पादन विशेषताहरु
Sberbank लागि अपार्टमेन्ट मूल्यांकन: मान्यता प्राप्त कम्पनीहरु
अलेक्जेन्डर Zhulin - व्यक्तिगत जीवन। फोटो। जीवनी। Zhulin Aleksandr - skater
के restyled जीप "Ssangyong Kyron" मा नयाँ?
"Berestye" Archeological संग्रहालय: वर्णन, सुविधाहरू, रोचक तथ्य र समीक्षा
नवजातको लागि "इन्फकोल": प्रयोगको लागि निर्देशन, रचना, प्रतिक्रिया
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को दिग्गजों गर्न कृतज्ञता एक पत्र: लेखन र उदाहरण को लागि नियम
खण्डका छत Clipso: समीक्षा, मूल्यहरू
लाभ र हानि: संग ऐंसेलु चिया